चीनलाई खुसी बनाउन ओलीले दिए चार वटा गैंडा उपहार ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > चीनलाई खुसी बनाउन ओलीले दिए चार वटा गैंडा उपहार !
चीनलाई खुसी बनाउन ओलीले दिए चार वटा गैंडा उपहार ! Rhinoceros Gifted to China video
एलिना कार्की, काठमाडौँ । देशमा रोजगारीको अवसर नभएको बताउँदै लाखौँ नेपाली युवा विदेशी भूमिमा कडा परिश्रम गरिरहेका छन् । खाडीको तातो घाममा जोखिमपूर्ण काम गर्न पुगेका कतिपय त लगानी समेत उठान नसकी पर्केका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा अवसरै छैन् भन्नेहरूका लागि पप्पु साह र राहुल साहले गतिलो जवाफ दिएका छन् ।
फेसबुकमा जथाभावी लेख्दै हुनुहुन्छ? अब यस्तो सजाय भोग्नु पर्ने भो
सरकारले ल्यायो नयाँ नियम, ९ किसिममा जग्गाको विभाजन गरेपछि अब काठमाण्डौ लगाएत देशभर जग्गाको मुल्य ह्वात्तै घट्ने